छिमेक : स्तब्ध भूस्वर्ग- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
भारतीय संविधानको धारा ३७० को खारेजीपछि भूस्वर्ग मानिएको कश्मीर मौन छ । इन्टरनेट र टेलिफोन बन्द गरेर, कर्फ्युका बीच भारत सरकारले धारा खारेजी गरेपछि कश्मीरीहरूको खास आवाज बाहिर आएको छैन ।
श्रावण २५, २०७६ सुरेश न्यौपाने
‘गर फिरदौस बर रुये जमिन अस्त,हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो’(यदि धर्तीमा कहीँ स्वर्ग छ भने त्यो यही हो, त्यो यही हो, यही हो) चर्चित उर्दू कवि आमीर खुसरोको शब्दमा कश्मीर (जम्मु–कश्मीर)  । खुसरोले बयानको गरेको कश्मीरको सुन्दर छटा र प्रकृतिको ख्याति संसारभर छ  ।
हिउँले सेताम्म ढाकिएको हिमालदेखि मनमोहक पोखरी, लोभलाग्दो पठार मात्र होइन मौलिक भाषा, संस्कृतिले पनि त्यहाँ पुग्नेहरूलाई मन्त्रमुग्ध पार्छ । त्यसमाथि हिन्दु धर्म मान्नेहरूका लागि पवित्र अमरनाथको दर्शन । यिनै धार्मिक र प्राकृतिक आकर्षणले हरेक वर्ष डेढ करोडको हाराहारीमा भारतीय र विदेशी पर्यटक कश्मीर पुग्ने गरेका छन् । अघिल्लो सातासम्म पनि जम्मु–कश्मीर आफ्नै धुनमा रमाइरहेको थियो । पर्यटकहरूको आतिथ्य गर्न कश्मीरहरूलाई भ्याईनभ्याई थियो ।
तर आइतबारदेखि परिस्थिति एकाएक फेरिएको छ । पर्यटकहरूलाई सधैं खुला हृदयले स्वागत गर्न तयार रहने भूस्वर्ग एकाएक मौन छ । केहीले त सातो गएको समेत भन्ने गरेका छन् । कश्मीर प्रतिक्रिया जनाउने अवस्थामा छैन । टेलिफोन, इन्टरनेट बन्द गरिएका छन् । कश्मीरीहरूबीच नै सम्पर्क छैन । त्यति मात्र होइन उनीहरूलाई हिँडडुल गर्नसमेत रोक लगाइएको छ । कर्फ्यु छ । कश्मीरीहरू बाहिरी दुनियाँमा उनीहरूका बारे के कस्तो चर्चा भइरहेको छ, त्यसबाट उनीहरू पूरै बेखर छन् । बाँकी दुनियाँसँगै पूरै सम्बन्धविच्छेद गराइएको छ जम्मु–कश्मीरलाई ।के गर्‍यो मोदी सरकारले त्यस्तो कि जसले गर्दा जम्मु–कश्मीर एकाएक मौन बन्न पुगेको छ । सोमबार अर्थात् ५ अगस्ट २०१९ । सोही दिन मोदी सरकारले भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० र ३५ (क) खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णय मार्फत मोदी सरकारले दिल्ली र जम्मु–कश्मीरबीचको सात दशक पुरानो सम्बन्धलाई पुनर्लेखन गरेको छ । किन गर्‍यो त मोदी सरकारले यो पुनर्लेखन ?
यसका लागि जम्मु–कश्मीरको विगततिर फर्कनुपर्छ । सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएसँगै जम्मु–कश्मीरले पनि आफू पनि स्वतः स्वतन्त्र भएको दाबी गर्‍यो । भारत र पाकिस्तान दुवैले यो उत्तरी राज्यमाथि आआफ्नो दाबी छाडेनन् । पाकिस्तानी समर्थक मुस्लिम लडाकुहरूले एकाएक आक्रमण गरेपछि तत्कालीन महाराज हरि सिंहले दिल्लीसमक्ष ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’ अर्थात् विलयको सम्झौता (कतिपयले करार पनि भन्छन्) को प्रस्ताव गरे । उक्त प्रस्तावमा कश्मीर पूर्ववत् अवस्थामा नफर्केसम्मका लागि भारतमा विलय हुने भन्ने थियो । तर, त्यसका केही सर्तहरू भने थिए । जसमा आफ्नै संविधान, आफ्नै झन्डालगायत थियो । तिनै सर्तहरूसहित जम्मु–कश्मीरका लागि मात्रै भारतको संविधानमा धारा ३७० र धारा ३५ (क) विशेष प्रबन्ध गरिएको थियो । ती धाराले जम्मु–कश्मीरलाई आफ्नो कानुन बनाउने, बाहिरका मानिसहरूले घरजग्गा किन्न नपाउनेलगायतका विशेष अधिकार थियो ।
ती धाराको खारेजीसँगै ती सबै जम्मु–कश्मीरले पाउँदै आएको सबै विशेषअधिकार गुमाएको छ । कट्टर राष्ट्रवादीहरूले एउटै देशभित्र अलग झन्डा र संविधान हुन नसक्ने भन्दै सुरुदेखि नै त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए । त्यही भएर नै मोदी सरकारको पछिल्लो निर्णयको त्यो तप्काले चर्को स्वरमा स्वागत गरेको छ । त्यति मात्र होइन, जम्मु–कश्मीरलाई जम्मु–कश्मीर र लद्दाख गरी दुईवटा अलग केन्द्रशासित राज्यमा परिणत गर्ने निर्णय पनि मोदी सरकारले गरेको छ । भाजपाले भने निर्णयले आफ्ना आदर्श श्यामाप्रसाद मुखर्जीको सपना साकार भएको दाबी गरेको छ । धारा ३७० को विरोधमा रहेका मुखर्जीको जम्मु–कश्मीरको जेलमै रहँदै मृत्यु भएको थियो । भाजपाले चुनावी घोषणापत्रमा पनि धारा ३७० र ३५ (क) खारेजीलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा अघि सारेको थियो । पछिल्लो निर्णयले पूरै भारतीय राजनीतिलाई नै तरंगित पारेको छ । यसको पक्ष र विपक्षमा उभिने होड पनि सुरु भएको छ । वर्तमान सत्ताप्रति सहानुभूति राख्ने राष्ट्रवादी र कट्टरपन्थीहरूले यो निर्णयलाई ऐतिहासिक संज्ञा दिएका छन् भने उदारवादीहरूले धारा ३७० दिल्ली र कश्मीरलाई जोड्ने डोरी थियो र त्यसको खारेजीले त्यो सम्बन्ध टुटेको दाबी गरेका छन् ।
एक किसिमले भन्दा पछिल्लो निर्णयलाई लिएर पूरै भारतीय समाज विभाजित छ । त्यो विभाजन सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रस्ट ढंगले प्रकट भइरहेको छ । राजनीतिज्ञ, पत्रकार, बौद्धिक वर्गदेखि बलिउडसम्म विभाजित छ । बलिउड कलाकार अनुपम खेरले कश्मीर विवाद समाधानका लागि गज्जबको सुरुआत भनेका छन् । त्यसो त उनी पहिलेदेखि नै कश्मीरलाई दिइएको विशेषअधिकार अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए ।
निर्णयको विरोध गर्नेहरूले कश्मीरी जनताको स्वीकृतिबिना धारा ३७० खारेज गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् । कश्मीरका राजनीतिज्ञहरूले बढी चित्त दुखाइ त्यसैमा रहेको पाइन्छ । उनीहरूले कश्मीरीहरूको आवाज बन्द गरेर गरिएको निर्णय कदापि मान्य नहुने बताएका छन् । सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू फारुख अब्दुल्लाह, मेहबुब मुफ्ती, उमर अब्दुल्लाहलगायतका कश्मीरका अधिकांश ठूला नेतालाई नजरबन्दमा राखेको छ ।
सरकारले लगाएको अघोषित कर्फ्यु र सञ्चारसेवा अवरुद्ध भएका कारण यो निर्णयका बारेमा स्वयं जम्मु–कश्मिरका नागरिकको धारणा भने बाहिर आउन सकेको छ्रैन । सानै पनि असन्तुष्टिका स्वरहरू भने सुनिन थालेका छन् । पंक्तिकारसँगको भेटमा दिल्लीमा भेटिएका केही कश्मीरीहरूले ३७० खारेज गर्ने निर्णयले कश्मीरीहरूको दिल्लीप्रतिको अविश्वास थप गहिरिएर जाने बताए ।
कश्मीरीहरूको अभिमत नलिई गरिएको यो निर्णयले दुस्परिणाम नै निम्त्याउने तर्क गरे । ‘यो त दुई जनाबीच भएको सम्झौतालाई एकतर्फी रूपमा तोडेको जस्तो भयो । कसरी मान्य हुन्छ, त्यो पनि कर्फ्यु लगाएर,’ दिल्लीमा अध्ययनरत एक कश्मीरी विद्यार्थीले भने । उनले यही निर्णय पनि कश्मीरीहरूको मन जितेर गर्न सकिन्थ्यो भन्ने जिकिर गरे । त्यसैगरी मंगलबार मात्र श्रीनगरबाट फर्केका भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ का सहायक सम्पादक मुजाजिल जलिलले त्यहाँको अवस्था पूरै अन्योलपूर्ण रहेको बताए । ‘पूरै सम्पर्क विच्छेद गरिएको छ । कश्मीर उपत्यकामा पूरै कर्फ्यु छ, बाहिर पनि आवतजावत गर्न निकै गाह्रो छ । पूरै कश्मीर स्तब्ध,’ उनले भने ।
जलिलका अनुसार एकतर्फी रूपमा ३७० अनुच्छेद खारेज गरिएकोमा दिल्लीप्रति झुकाव राख्ने कश्मीरीहरूको बढी चित्त दुखाइ छ । यसले कश्मीरमा भारतविरोधी भावना थप जागृत हुने र त्यसले दिल्लीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने उनले बताए । त्यसैगरी पछिल्लो निर्णयले यसअघिको कश्मीरीहरूले मात्र त्यहाँको जमिन खरिद गर्न पाउने र सरकार जागिर खान पाउने व्यवस्था पनि स्वतः खारेज भएको हुँदा त्यसले बाहिरियाहरूको संख्या बढेर कश्मीरको पहिचान गुम्ने डरसमेत स्थानीयहरूमा रहेको जलिलले बताए । ‘यो त बिल्कुलै अनपेक्षित घटना हो । आगामी दिनहरू कस्तो रहनेछन् यसै भन्न सक्दिनँ,’ जलिलको भनाइ छ ।
लेखक रामचन्द्र गुहाले त सञ्चारमाध्यमहरूलाई दिएको प्रतिक्रियामा ३७० खारेजीको निर्णय प्रक्रिया गलत भएको भन्दै भविष्यका लागि प्रत्युत्पादक हुने दाबी गरेका छन् । ‘कानुन परिवर्तन गर्ने पनि विधि हुन्छन् । यही निर्णय पनि संसद्मा पेस गर्नुअघि सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिनुपर्थ्यो,’ उनले भनेका छन् । गुहाले यस किसिमको निर्णय मुलुकको भविष्यका लागि भने राम्रो नभएको दाबी गरेका छन् ।
मोदी सरकारले भने शान्तिसुरक्षा र विकासमा पछाडि परेका लगायतका विभिन्न तर्कहरू अघि सारेको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले संसद्मा सरकारको निर्णयको बचाउ गर्ने क्रममा धारा ३७० कै कारण जम्मु–कश्मीरमा केन्द्र सरकारले विकासका कार्यक्रमहरू लागू गर्न नपाएको जसले गर्दा सामाजिक र आर्थिक हिसाबले त्यो राज्य पछि परेको दाबी गरेका थिए । तर, तथ्यांकहरूले त्यस्तो देखाउँदैन । करिब सवा करोड आवादी रहेको यो राज्य औसत आयुका हिसाबले २२ वटा राज्यहरूमध्ये तेस्रो नम्बरमा पर्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूको संख्या १०.३५ प्रतिशत मात्र छ । जबकि राष्ट्रिय औसत २१.९२ छ । रोजगारीको अवस्था भने केही कमजोर छ ।
अर्कोतर्फ कश्मीरको अवस्था सामान्य देखाउने रणनीति पनि सरकारले जारी राखेको छ । भारतका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबल त दक्षिणी कश्मीरको एउटा सडकमा सर्वसाधारणसँग बिरयानी खाइरहेको भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको छ । जबकि भारतीय सन्चारमाध्यमहरूले नै कश्मीरका राजनीतिज्ञहरूलाई अझै पनि नजरबन्दमा राखिएको दाबी गरेका छन् । र, त्यहाँको वातावरण पूरै अन्योलमय रहेको बताएका छन् ।
जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णय आफैंमा भारतको आन्तरिक भए पनि त्यसले पूरै दक्षिण एसियालाई नै तनावपूर्ण बनाउने प्रारम्भिक संकेत देखिइसकेको छ । अमेरिकालगायका ठूला शक्तिराष्ट्रहरूले निर्णयको विरोध नगरे पनि छिमेकी पाकिस्तानले तीव्र विरोध गरेको छ । र, उसले विरोधस्वरूप भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धको स्तर कम गर्ने र आफ्ना दूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । त्यति मात्र होइन भारतले गरेको निर्णयको सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्लाई पनि पत्राचार गरिसकेको छ । सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले पछिल्लो विश्व राजनीतिक समीकरणलाई हेर्दा जम्मु–कश्मीरको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया आक्रामक नहुने अनुमान
गरिएको छ ।
तर, पछिल्लो निर्णयसँगै जम्मु–कश्मीरको एउटा अध्यायको अन्त्य भने भएको छ । हाल निर्णयको पक्षमा रहेको आवाज केही चर्को सुनिएको छ भने मुख्य सरोकारवाला कश्मीरीहरूको आवाज भने केही सुस्त छ वा दबिएको छ । र, ती कश्मीरीहरूको आवाज कहिले र कसरी मुखरित हुनेछ, त्यसैले नै खुसरोको स्वर्ग भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ ।
प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ११:२७
सम्झना : मौनमा मोरिसन
श्रावण २५, २०७६ ईश्वर बुढाथोकी
बाटो बिराएर सबभन्दा धेरै गल्ती सायद मृत्युले नै गर्छ  । नत्र त अगस्ट ५ को रात विश्वको साहित्यिक अकाशबाट टोनी मोरिसन नामको एउटा प्रकाशपुञ्ज सधैँका लागि अस्ताउने नै थिएन  ।
मोरिसनको मृत्यु ‘मृत्यु’ स्वयम्ले पनि सच्याउन नसक्ने गरी गरेको ‘गल्ती’ थियो । बाराक ओबामाको कार्यकालमा उनलाई स्वतन्त्रताको राष्ट्रपतीय मेडलद्वारा सम्मान गरिएको थियो । उनको मृत्युलगत्तै ओबामाले त्यही २०१२ को सम्मान कार्यक्रममा सँगै खिचिएको तस्बिर राख्दै गहिरो श्रद्धाञ्जली दिए । उनले ट्विटरमा लेखे, ‘मोरिसन एक राष्ट्रिय गहना थिइन् । उनी पृष्ठहरूमा जतिकै व्यक्तिगत रूपमा पनि मनमुग्ध पार्ने उत्तम कथाकार थिइन् । उनका लेखहरू सुन्दर र अर्थपूर्ण चुनौती थिए । हाम्रो विवेक तथा नैतिक कल्पनाका लागि एक छिन भए पनि उनले र मैले एउटै हावामा श्वास लिन पाउनु मेरो लागि ठूलो उपहार थियो ।’
अहिलेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विषयमा भने अनलाइन सामाचारहरूमा व्यंग्यवाण सुरु भइसकेको छ— के ट्रम्पलाई टोनी मोरिसनको बारेमा थाहा छैन ? हुन पनि ट्रम्पको निर्वाचनको लगतै २०१६ मा ‘न्युयोर्कर’ मा प्रकाशित मोरिसनको एक निबन्धमा उनले धेरैले जस्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि हिंसात्मक तथा जातीय धारणाहरूलाई सुरक्षित किनारा लगाउने भविष्यवाणी गरेकी थिइन् । यो लेख तयार पार्दासम्म ट्रम्पको कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भैसकेको छैन ।भावनालाई पनि आफ्नो भाषाको नियन्त्रणमा राख्न सक्ने बेग्लै शक्ति र सामर्थ भएकी मोरिसनले उज्यालोको मसीमा आफ्नो कलमलाई चोपेर अँध्यारोमा यसरी पोखेकी थिइन् मानौँ उनले पोखेको मसी तेलका ती चम्किला थोपाहरूजस्तै हुन् जो संसारलाई डुबाउने समुद्रमाथि पनि तैरिरहेका छन् । तिनलाई डुबाउने तागत समुद्रसँग त के कुनै सुनामीसित पनि छैन ।
आफ्नो अभिव्यक्तिलाई कलात्मक रूप दिने मामिलामा धेरै नै कहलिएकी यी अश्वेत लेखिकाको जन्म सन् १९१८ को फेब्रुअरी १८ मा अमेरिकाको ओहायो राज्यमा भएको थियो । यिनको वास्तविक नाम कोल अर्डेलिया उफर्ड थियो । आफ्नो समयकी अत्यत्तै प्रभावशाली लेखिका मोरिसनको प्रभाव पछिल्लो समयमा पनि उत्तिकै थियो । पुरस्कारको सन्दर्भमा पनि मोरिसन निकै भाग्यमानी लेखिका मानिन्थिन् । त्यो किनभने सन् १९९३ मा उनलाई नोबेल पुरस्कार दिँदा पुरस्कारका लागि मनोनीत हुनेको सूचीमा उनको नाम अटाएकै थिएन । तैपनि उनलाई अश्वेतहरूका जीवानुभवमाथि लेखेको भन्दै नोबेल पुरस्कार दिइएको थियो । त्यतिबेला उनको लेखनस्तरलाई ‘आश्चर्यजनक रूपमा श्रेष्ठ’ भनिएको थियो । तत्कालीन पुरस्कार समितिका सचिव स्टिभ एलनले भनेका थिए, ‘विश्वास नै हुँदैन एउटा लेखकका ६ वटा उपन्यास के कारणले समान रूपमा श्रेष्ठ हुन सक्छ ?’
उनको साहित्यिक हैसियतको उचाइको अघिल्तिर पुरस्कारको कद होचो थियो । त्यसैले पनि कसैले उनको विरोध गरेनन् । स्विडिस एकेडेमीको यो निर्णयलाई साहित्यिक दुनियाले पनि अनुमोदन गर्‍यो । सन् १९७७ मा प्रकाशित ‘सङ्ग अफ सोलोमन’ को प्रकाशन पछि उनी अत्यधिक पाठकको आँखामा परेकी थिइन् । श्वेत र अश्वेत दुवैथरीका पाठकले उनलाई खुब रुचाउन थालेका थिए । त्यसको एक दशकपछि उनको अर्को उपन्यास ‘बिलोभेड’ प्रकाशित भएको थियो । यो उपन्यास कतिसम्म लोकप्रिय भयो भने यस किताबलाई कुनै राष्ट्रिय पुरस्कार नदिएको भनेर खेद व्यक्त गर्दै ‘न्युयोर्क टाइम्स बुक रिभ्यु’ मा हज्जारौँ पाठकका पत्रको लस्कर नै लाग्यो । एउटा इमानदार लेखकका लागि योभन्दा ठूलो पुरस्कार अरू के हुन सक्ला ? यसपछि उनले पुलित्जर पुरस्कार पनि पाइन् । पाठकीय दबाब त थियो नै तर पुरस्कार समितिले सफाइ दिँदै भनेको थियो ‘उनलाई प्रचारको दबाबले होइन, रचनात्मक श्रेष्ठताको कारणले पुरस्कार दिइएको हो।’
कुनै बेला मोरिसनलाई पनि गरिबी र कष्टले खलपात्रले झैँ खेद्नुसम्म खेदेको थियो । तर उनले दृढता, मिहिनेत र इच्छा शक्तिले तिनलाई पराजित गरेकी थिइन् । जीवन निर्वाहका लागि भेटेसम्मका काम गर्दै लेखनमा होमिएकी थिइन् । वासिङ्टनको हावर्ड विश्वविद्यालय हुँदै कोर्नेल विश्वविद्यालयबाट उनले आफ्नो औपचारिक अध्ययन पूरा गरिन् । स्नातकोत्तर अध्ययनका क्रममा उनले बिलियम फाक्नर र भर्जिनिया उल्फका सिर्जनामा आत्महत्या गर्ने पात्रहरूमाथि शोधपत्र लेखेकी थिइन् । त्यसपछि टेक्सास र हावर्ड विश्वविद्यालयमा नै अंग्रेजी पढाउन थालेकी उनले हावर्डमै पढाउने क्रममा हेराल्ड मोरिसन नाम गरेका एक आर्किटेक इन्जिनियरसित विवाह गरिन् । दुई छोरा जन्मिएपछि उनीहरूको दाम्पत्य जीवन टुङ्गियो । उनले हावर्ड छोडिन् र न्युयोर्क आएर एक प्रकाशन गृहमा पाठ्यपुस्तकको सम्पादनको कार्य गर्न थालिन् । एकातिर जागिर अर्कोतिर लेखन र बालबच्चा । उनको व्यस्तता बढ्यो । उनी बिहान सबेरै उठ्थिन् र छोराहरू उठ्नुअघि नै लेख्न बस्थिन् । उनी आफ्नो सिर्जनालाई सकुन्जेल परिमार्जन गर्थिन् । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ आफ्ना सिर्जनालाई ६ देखि १३ पटकसम्म परिमार्जन गर्न पनि उनी अल्छी मान्थिनन् ।
मोरिसनले आफ्ना कुनै पनि उपन्यासमा निजी जीवनकथालाई प्रतिविम्बित गरेकी छैनन् । बरु अश्वेत नारीहरूका सामाजिक स्थिति र तिनका अनुभव, अनुभूतिलाई उपन्यासमा उतारी रहिन् । उनले आफ्ना लेखनमा समाजका यथार्थ, संघर्ष तथा इच्छा आकांक्षालाई शक्तिशाली रूपमा प्रस्तुत गर्केी छन् । मोरिसनलाई नोबेल पुरस्कार दिने घोषणा भइरहँदा जर्मनीको फ्र्यांकफर्टमा विश्व पुस्तक मेला चलिरहेको थियो । मेलाका कुनै पनि स्टलमा उनका पुस्तकहरू राखिएका थिएनन् । पुरस्कारको घोषणा लगत्तै गोदामतिरै थन्किएका उनका पुस्तकलाई मेलामा लगिएको थियो । त्यसपछि प्रकाशकले थेग्नै नसक्ने गरी उनका किताबहरू बेचका थिए । बजारमा पनि उनका किताबको माग धेरै हुन थाल्यो । उनको तेस्रो पुस्तक ‘सङ्ग अफ सोलोमन’ लेख्नुअघिसम्म लेखन उनको प्राथमिकतामा परेकै थिएन । एउटी महिला त्यसमाथि अश्वेत वर्णको कारण उनी आफूलाई आत्मविश्वासका साथ लेखक हुँ भन्न पनि सक्दिनथिन् । सुरुआतका उनका पुस्तकहरू उनको रङकै कारण छापिएका थिए । किनभने श्वेत पाठकहरूको अलिअलि रुचि अश्वेत लेखकहरूप्रति देखिन थालेको थियो ।
सुरुसुरुमा त प्रकाशकहरूले उनलाई नाम मात्रको पारिश्रमिक दिएका थिए । त्यति बेला निस्किएका उनका किताबहरूमाथि ‘न्युयोर्क टाइम्स’ ले गरेका समीक्षा निरुत्साहित गर्ने खालका मात्र थिए । तर पनि उनले कहिल्यै हिम्मत हारिनन् । उनी प्रायःजसो सानो विचारबाटै अन्तर्मन्थन गर्थिन् र लेखनको पृष्ठभूमि तयार पार्थिन् । त्यो रोचक पनि हुन सक्थ्यो र पट्यारलाग्दो पनि । उनी त्यसको पनि हेक्का राख्थिन् । आफ्ना काल्पनिक पात्रलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्न रुचाउने यी लेखिकाले एक अन्तर्वार्तामा ‘यौन र यौन सम्बन्धबारे लेख्नु कठिन हुने र यसलाई विस्तारमा लेख्न नहुने’ भन्ने भनाइ राखेकी थिइन् । ‘यौन भनेको यस्तो कुरा जसबारे थोरै मात्र लेखेर पाठकलाई आफैं उत्तेजनामा आउन दिनुपर्छ । कुनै महिलाको शारीरिक अंग वर्णन गर्नका लागि त्यसबारे विस्तारमा लेख्नेबित्तिकै लेखक, लेखक नभएर स्त्री रोग विशेषज्ञजस्तो हुन पुग्छ । कति लेखक अपशब्दको प्रयोग गरेर निकै रमाउँछन् । त्यस्ता लेखनको प्रभाव क्षणिक हुन्छ’ भन्ने उनको मान्यता थियो । आफ्नो लेखाइ त्यस्तो हुँदैन होस् भन्नेमा उनी प्रतिबद्ध थिइन् ।
यसरी अश्वेत नारीहरूको पीडा र मर्मलाई शब्दमा उतार्ने मोरिसन सन् १९८९ देखि प्रिन्सटन विश्वविद्यालयमा प्रोफेसर अफ हुम्यानेटिजका रूपमा कार्यरत थिइन् । पछिल्लो समय आफ्ना परिवारसित न्युयोर्कमा आफ्नो बुढेसकाल बिताइरहेकी उनी मृत्यु हुँदा ८८ वर्षकी थिइन् । खासगरी अश्वेत जिन्दगीका अनेकन विषम भोगाइहरूका जीवन्त अनुभूतिलाई आकार दिएर असंगतिबाट उत्पन्न स्थितिसँगै आफ्ना मौलिक संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषयको उठानमा उनको कलम विश्व साहित्यिक फाँटमा दरिलो स्तम्भ भएर उभिरहनेछ ।
प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ११:४८